Toy izany no misy ny biby any Afrika rehefa tsy tsikaritray | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | sary, General
La fanodinkodinana sary amin'ny alàlan'ny programa satria ny Adobe Photoshop dia miankina betsaka amin'ny saintsika sy ny fahaizantsika noho ny fetran'ity fitaovana lehibe ity; Fa momba izay ihany nandresy Oscar tamin'ity taona ity.
Thomas Subtil dia namorona andiana sarys izay nampiasany Photoshop hamoronana fisamborana izay tsy azo atao tsotra izao eo amin'ny tontolo tena izy, fa kosa mampiseho hoe manao ahoana izany fotoana izany raha tsy misy olona mandinika ny fihetsiky ny biby.
Tamin'ny 2013 dia tamin'ny nandeha tany Kenya ny mpanakanto rehefa nahita tontolo hafa sy nahafinaritra tanteraka izy. Tontolo noforonin'i Subtil izay ahafahan'ny elefanta mijoro eo anelanelan'ny hazo roa, na amin'ny toerana anaovan'ny zirafy ny akanjony.
Este Nanodina ny tantara ny artista frantsay avy amin'ny kaontinanta mahatalanjona toa an'i Afrika amin'ny tontolo tsy tena izy izay biby no maherifo.
Subtil koa dia namorona andiana sary namboarina nantsoina hoe Anadium, izay anisany sary an-tsaina ireo biby dia mandritra ny diany mamaky ny ambanin'ny tanàna. Ao anatin'ireo sarety na lalan-kely ireo ihany no ahitanao azy ireo bibidia mirenireny ireo toy ny hoe olona izy ireo.
Ny zavatra mahatsikaiky momba ny anaran'ny andian-tantara izay kintana amin'ireo biby dia ao Afrika dia nantsoiny hoe "Ny tena ain'ny biby dia any Afrika". Toy ny milaza fa rehefa mitodika any amin'izy ireo isika dia samy manana ny endrik'izy ireo amin'ny olona fantatsika.
Os miala amin'ny tranokalanao izahay izay ahafahanao manaraka ny anao asa, toy ny pejinao facebook. Manararaotra izahay mampiseho aminao ny sanganasa hafa ataon'ireo mpanakanto hafa mifandraika amin'ny biby. Theo Jansen sy ny azy biby amoron-dranomasina, biby mahafinaritra misy tanimanga mpanakanto rosiana ity, na ilay tsara tarehy e Origami mahatalanjona nataon'i Gonzalo Calvo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Famoronana sary tsy azo atao izay mampiseho biby rehefa tsy misy olona mijery azy ireo
Ahoana ny fanatsarana ny famolavolana ny toetranao